गरे के सम्भव छैन ? यी हुन् खुट्टाले विमान उडाउने संसारकै पहिलो र एकल महिला पाइलट – Dainiksamchar
HomeNewsगरे के सम्भव छैन ? यी हुन् खुट्टाले विमान उडाउने संसारकै पहिलो र एकल महिला पाइलट
November 21, 2020 admin News 10351
आज हामी तपाईलाई यस्तै एउटा प्रेरक प्रसंगको बारेमा जानकारी दिनेछौँ । एक महिलाका दुई वटै हात छैनन् तर पति उनी विमान उडाउँछिन्।भन्दा तपाईंलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर यो बास्तविकता हो ।उनी खुट्टाको सहयोगमा विमान उडाउँछिन् । त्यति मात्रै होइन उनले गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा समेत नाम लेखाएकी छन् । उनी संसारकै एकल महिला हुन् । जसले विमान खुट्टाले उडाउँछिन् ।
उनको नाम रहेको जेसिका । उनीसँग संसारकै यस्तो लाइसेन्स छ । जो अन्य शारीरिक अशक्तता भएका मानिससँग छैन । ३६ वर्षीया जेसिका आफ्नो खुट्टाको सहयोगले विमान चलाउँछ । उनले २२ वर्षको उमेर देखि विमान चलाउन थालेकी हुन् ।उनले १४ वर्षबाट आफ्नो खुट्टाले काम गर्न थालेकी थिइन् । उनले हालसम्म २३ देशमा उडान भरेकी छन्
खुसिको खबर – दशैंको अफरमा आयो अहिलेसम्मकै सस्तो मुल्यको आकर्षक पल्सर बाइक
September 27, 2020 admin News 2296
बजाज मोटरसाइकलको लागि नेपालका लागि आधिकारिक वितरक हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले आजबाट चाडपर्व लक्षित ग्राहक योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ल्याएको ग्राहक योजनामा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा पल्सर १२५ किन्ने सोच बनाएका ग्राहकले मासिक
October 7, 2020 admin News 780
काठमाडौ । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मुल्य ओरोलो लागेको छ । मंगलबार तोलामा ९४ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मुल्य आज ८ सयले घटेर प्रतितोला ९४ हजार १ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको
October 3, 2020 admin News 613
काठमाडौं । भारतका पिता महात्मा गान्धी १५१औं जन्म जयन्तीका अवसरमा नेपालका कान्छा अभियन्ता केपी खनाललाई युथ आइकन अवार्डमार्फत सम्मान गरिएको छ। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शुक्रबार राइजिङ टुइकल फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा युथ आइकन अवार्डबाट खनाल
LEX 18 agenda conversation: Job club (121706)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (113609)
Hello world! (113283)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (112041)